Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Jimce Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub. - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Jimce Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub.
Gool dhaliyaha Manchester United ee Romelu Lukaku ayaa qarka u saaran in uu ku biiro kooxda Inter Milan isaga oo waliba si wayn u amaanay Antoni Conte.
Tottenham ayaa xagaagan laba jeer rekoodhka suuqa kala iibsiga kooxdeeda jabin karta iyada oo Mauricio Pochettino uu doonayo in uu kooxdiisa keeno xidiga Real Betis ee Giovani Lo Celso iyo khadka dhexe ee kooxda Lyon ee Tanguy Ndombele.
Arsenal ayaa £10.6 milyan gini ku dalban doonta kabtanka kooxdeeda Laurent Koscielny iyada oo kooxda Borussia Dortmund xiiso ka muujisay xidiga reer France.
Xidiga cuno qabatayntu soo saarnayd xili ciyaareedkii dhamaaday ee Adrien Rabiot ayaa si layaableh u sii joogi kara kooxdii uu xidhiidhkoodu burburay ee Paris Saint-Germain iyada oo agaasimaha cusub ee kooxda la wareegayaa uu wada hadal la furi doono.
Real Madrid ayaa sii wadi doonta kharash garaynta lacagta badan ee ay xagaagan suuqa galaysay waxayna doonaysaa xidiga reer Japan ee Takefusa Kubo.
Eden Hazard ayaa Luka Modric ka dalbaday Luka Modric in uu siiyo lambarka 10-aad ee kooxdiisa Real Madrid laakiin Modric ayaa iska diiday.
Manchester City iyo Manchester United ayaa lagu qasbi karaa in ay rekoodhka suuqa difaacyada u jabiyaan Harry Maguire ama in ay ka quustaan kadib markii ay kooxdiisa Leicester City ku qiimaysay 90 milyan gini waana lacag ka badan intii Van Dijk ay Liverpool rekoodhka ugu dhigtay.
Massimiliano Allegri ayaa meesha ka saaray in Maurizio Sarri uu isna Chelsea ka badali doono wuxuuna Allegri ku dhawaaqay in uu sanad fasax ah kubbada cagta ka gali doono si uu noloshiisa kale gacanta ugu soo celiyo.
Kooxda heerka labaad ka soo dalacday ee Premier league ka ciyaari doonta ee Sheffield United ayaa ka mid ah kooxaha doonaya kabtanka Manchester United ee Antonio Valencia oo si xor ah ku bixi doona June 30.
Kooxda Borussia Dortmund ayaa la socota xaalada kabtanka kooxda Arsenal ee Laurent Koscielny oo 33 sano jir ah kaas oo ay Gunners u ogolaan karto in uu bixi karo xagaagan (Mail)
Riix 2 si aad wararka wargaysyada Yurub u akhrisato